Radio Don Bosco - Ny vavaka sy ny fahanginana
Jesoa mihitsy àry no manainga antsika ao amin'ny Evanjelin'i Masindahy Matio 6,6 momba izany. Andeha jerentsika àry ety am-panombohana ny ambaran'i Jesoa ao amin'io Matio 6,6 io: "Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin'nu efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana, dia mivavaha amin'ny Rainao izay ao amin'ny mangingina".
Koa dia izao fotsiny ihany no ataovy: mahatsiaro amim-pahanginana fa eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy mihetsiketika fa mitombon-tsaina tsara. Foanana tsy asiana na inona na inona ao an-tsaina na ny fo. Tsy mieritreritra na inona na inona. Tsy maniry na inona na inona. Tsy mampiasa saina na amin'inona na amin'inona. Mahatsiaro amim-pahatsorana fa eo anatrehan'Andriamanitra, izay fantantsika fa tia sy mihaino antsika.
Izany no atao hoe mijery sy mihaino amim-pitiavana ary mandinika amim-pahanginana ny momba an'Andriamanitra.
Mahalala sy mahatsapa fa tia antsika Andriamanitra. Ka mamaly fitia azy amim-pahatsorana, toy ny ataon'ny zazakely. Tsy be ahiahy. Satria tsy ilaina izany! Tsy miandry na inona na inona ihany koa, satria mahalala fa efa hetsahin'Andriamanitra ny fitiavany.
Niantrano tao amin'ireo sakaizany i Jesoa, indray andro. Noheverin'i Marta, tompon-trano, fa tsy maintsy raisina amin'ny fomba mendrika sy mihaja ity vahiny miantrano ao aminy. Dia somebiseby ery izy, nisahirana. Raikitra mikenonkenona amin'ny antsipirian-javatra isan-karazany. Mandritra izany fotoana izany anefa ilay rahavaviny, i Maria, dia mipetraka eo an-tongotr'i Jesoa. Mangina sy tsy miteny fa mihaino fotsiny. Ary dia tsy manao na inona na inona afa-tsy izay ihany. Tamin'izay indrindra i Marta no nitaraina fa tsy mba manao na inona na inona ity rahavaviny ity. Kinajo izy, indray no nahazo fananarana (Lioka 10,38 - 42).
Fihetsik'olon-dehibe, mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra ny an'i Marta. Asehony amin'ny asany ny fahamaizany hanompo. Fomba azo tsapain-tanana enti-maneho ny fitiavana ny Tompo izany. Tsara ny nataony. Saingy hadinony fa misy fomba hafa koa, ankoatra ny asa eto ivelany, anehoana an'izany fitiavana izany: dia ny mahatsiaro fa mifanatri-tava ary iray fo sy fisainana amin'Andriamanitra tia azy, na dia tsy miteny na miloa-bava ilay olona.
Azo ampitahaina amin'ilay zazakely mihaino sy mijery amim-pitiavana i Maria. Eo fotsiny izy. SAMBATRA!
Ny nataon'i Maria no azo lazaina ho sarintsarin'ilay vavaka atao amim-pahanginana antsoina hoe: fibanjinana (mijery sy mihaino amim-pitiavana ary mandinika). Ka i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra, hoy i Jesoa (Lioka 10,42).